3 व्यक्तिगत विकास योजनाको चरणहरू - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 15, 2018 | व्यक्तिगत विकास योजना, व्यक्तिगत विकास |0|
1 व्यक्तिगत विकास योजना चरण १ - सोच्नुहोस्
1.1 व्यक्तिगत विकास योजना चरण २ - योजना
2 व्यक्तिगत विकास योजना चरण - - गर्नुहोस्!
सफल व्यक्तिगत विकास योजनालाई3चरणमा टुक्राउन सकिन्छ। सोच - योजना - गर्नुहोस्!
प्रत्येक चरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित गर्न को लागी अर्को मा जानु अघि सावधानीपूर्वक विचार र पूर्ण हुनुपर्दछ।
व्यक्तिगत विकास योजना चरण १ - सोच्नुहोस्
“यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ,
तिमी त्यहाँ पुग्छौ भनेर कसरी थाहा पाउने? ”
व्यक्तिगत विकास योजना बनाउने पहिलो चरण भनेको तपाईले चाहानु भएको कुरा पहिचान गर्नु हो। यो लागू हुन्छ कि तपाईंको व्यक्तिगत विकास योजना क्यारियर आधारित निर्णय को लागी प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ वा तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा केहि परिवर्तन गर्न।
सोच प्रक्रियाले तपाईलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुने चीजहरूको संख्या पहिचान गर्न सक्दछ। एक सूची बनाउनुहोस्। त्यहाँ केहि छन् जो मिलाउन सकिन्छ? उदाहरण को लागी:
"म कामका सहकर्मीहरूसँग बढी सामजिक बनाउन चाहन्छु"
"म आफ्नो स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सुधार गर्न चाहन्छु"
तिनीहरू दुई अलग लक्ष्य जस्तै लाग्न सक्छ, तर नजिकको निरीक्षण मा एक प्रभावकारी कार्य को कोर्स बनाउन संयुक्त गर्न सकिन्छ। कसरी? त्यहाँ एक कम्पनी फिटनेस क्लब वा जिम हुन सक्छ कि तपाईं सामेल हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो सहयोगीहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। वा तपाइँका कुनै पनि सह-कार्यकर्ताहरू खेलकुद समूहसँग सम्बन्धित छ? तिनीहरूलाई नयाँ खेलाडी चाहिन सक्छ जसले तपाईंलाई दुबै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने अवसर दिनेछ।
तपाइँ के चाहानुहुन्छ पहिचान गर्न समय लिनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईका लक्ष्यहरू छन् के तपाईं चाहनुहुन्छ र तपाइँको लागि अरू कसैको दृष्टिकोण होईन। जब तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरूमा निर्णय लिनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को चरणमा जानुहोस्।
व्यक्तिगत विकास योजना चरण २ - योजना
अब जब तपाइँले के चाहानुहुन्छ भनेर तपाइँ पहिचान गर्नुभयो, प्रक्रियाको अर्को चरणले कसरी योजना बनाइरहेको छ तपाइँ तपाइँको लक्ष्य वा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यो समय तपाईका विचारहरू कागजमा वा प्रिन्टमा राख्नु हो।
तपाईंको व्यक्तिगत विकास योजना लेख्दा निम्न कार्य गर्दछ:
एक लिखित प्रतिबद्धता बनाएर तपाईं सशक्त
पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण तपाईले लिन सक्ने समूह, क्लब वा क्लबहरू जसमा तपाइँ सामिल हुन सक्नुहुन्छ वा तपाइँले तपाइँको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ भनेर अनुसन्धान गर्दै तपाइँलाई शिक्षित गर्नुहोस्
सबै चरणहरूको लागि तपाईंलाई तयार पार्नुहोस् तपाईले प्रक्रियामा पार गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
याद गर्नुहोस् एक व्यक्तिगत विकास योजना जटिल हुनु हुँदैन। के गर्नु आवश्यक छ स्पष्ट रूपमा तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न को लागी लिनु पर्छ कदमहरू बाहिर सेट छ। तपाइँको पाउनुहोस् नि: शुल्क व्यक्तिगत विकास योजना रिपोर्ट त्यसपछि आफ्नै व्यक्तिगत विकास योजना बनाउनुहोस्.
लक्ष्य मितिहरू सेट गर्नुहोस् जुन यथार्थपरक छ। पुन: भ्रमण गर्नुहोस् र नियमित रूपमा तपाईंको योजना अपडेट गर्नुहोस् तपाईं पनी ट्र्याकमा हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न।
व्यक्तिगत विकास योजना चरण - - गर्नुहोस्!
"हजार माईलको यात्रा एकल चरणबाट सुरु हुन्छ - लाओ ट्जु"
तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ यसलाई कसरी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ र तपाइँको व्यक्तिगत विकास योजना बनाउनुभएको छ। अब बाँकी सबै तपाइँको योजनालाई कार्यमा राख्नको लागि हो।
धेरै तरिकामा यो व्यक्तिगत विकास योजनाको stages चरणहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो त्यहि हो जहाँ सम्पूर्ण प्रक्रियाले तपाईंलाई ल्याएको छ। तपाईं यहाँ पुग्नुभयो किनकि तपाईंले यहाँ ल्याउनको लागि आवश्यक सबै गर्नु भएको छ। त्यसैले संसारको सबैभन्दा सफल कम्पनीहरु को एक आदर्श वाक्य orrowण लिनुहोस् - 'बस यो गर्नुहोस्!'
तपाईको व्यक्तिगत विकास योजनालाई तपाईको गाईडको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र तपाई आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ कि कसरी चीजहरू सजिलो हुन्छ तपाईले पहिलो कदम चाले पछि।
त्यहाँ केही क्षणहरू हुन सक्छन् जब तपाईलाई आफ्नो मार्गमा सहयोग चाहिन्छ। कसैलाई खोज्नुहोस् जसले प्रोत्साहन र प्रशंसा प्रदान गर्दछ जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ। यो एक परिवारको सदस्य, पार्टनर, साथी, काम सहयोगी वा एक हुन सक्छ व्यक्तिगत जीवन कोच.
कहिलेकाँहि केहि शब्दहरू वा साधारण प्रेरणादायक उद्धरण वा भनाइ तपाइँको जीवन परिवर्तन गर्न र तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक प्रेरणा प्रदान गर्न सक्दछ।
"संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू सबैलाई आशा नगरिएको बेला प्रयासमा राखिएका व्यक्तिहरूले पूरा गरे।"
पछिल्लोनमूना बाल हेरचाह सहायक CV / पुनःसुरु
अर्कोएक क्यारियर को रूप मा एक जीवन कोच बन्ने
30 मित्रता मा महान प्रेरणादायक उद्धरण